अहिले लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भइसकेको छ । त्यही भएर राजधानीबासीले मोबाइल चार्ज गर्न नपाउने दुःखबाट मुक्ति पाएका छन् । नत्र १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्ने राजधानीका जनताका लागि मोबाइल चार्ज गर्नु ठूलो समस्या हुने गर्दथ्यो । अझै पनि लामो यात्रा गर्दा मोबाइल चार्जको समस्या भने कायम छ । त्यसमाथि पनि स्मार्टफोनको चार्ज धेरै समय नटिक्ने त ..
दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसङले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एसएट आउँदो फेब्र..
हामीले नदेख्ने चन्द्रमाको अर्को रहस्यमयी पाटोमा चीन पहिलो पटक जाँदै
बेइजिङ – चीन चन्द्रमाको टाढाको इलाकामा जाने पहिलो देश बन्दै छ । चीनले मंगलबार आफ..
यो स्मार्टफोनको अगाडि अहिलेसम्मका सबै फोन फिक्काः यस्ता छन् विशेषता
यदि तपाईं कुनै राम्रो स्मार्टफोन खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सायद योभन्दा राम..
सन् २०१७ मा फेसबुकमा केही परिवर्तन देखिनेछन् । परिवर्तन मात्र होइनन् केही नयाँ व..
पृथ्वीबाट लोप हुने संघारमा चितुवा
काठमाडौँ – विश्वकै तीव्र गतिमा दौडने जीव चितुवा त्यतिनै तीव्र गतिमा लोप हुने अवस्थामा पुग्दै गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार विश्वमा अब ७ हजार १ सयवटा मात्र चितुवा रहेका छन् । उनीहरुको संरक्षका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएपनि त्योभन्दा बाहिरसम्म बसोबास गर्ने गरेका छन् । चितुवाको वासस्थान मासिन थालेपछि पछि..
यस वर्ष संसारभरी चर्चित भएका यी एप्स
हामी सन् २०१६ को अन्त्यमा छौं । गुगलले हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि ‘बेस्ट एप्स अफ द इयर’ को सूची जारी गरेको छ । यी सूचीमा ती एप्सबारे जानकारी दिएको छ जुन सन् २०१६ मा संसारभरी चर्चित रहे । यी एप्सलाई थुप्रै वर्गमा बाँडिएको छ जसमा गेम्स, म्युजिक, मुभी, टिभी शो र बुक्स छन् […]
विगतका वर्षहरु भन्दा यस वर्ष बजारमा उत्कृष्ट स्मार्टफोन सार्वजनिक भए । कुनैको क्यामरा पिक्सेल राम्रो छ, कुनैमा शक्तिशाली सेन्सर राखिएका छ भने कुनैमा एड्भान्स अटोफोकस फिचर राखिएका छन् । यदि तपाईंलाई फोटो खिच्न मनपर्छ र राम्रो क्यामरा भएको स्मार्टफोन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सन् २०१६ मा बजारमा भित्र्याइएका १० उत्कृष्ट क्यामरा..
दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर संवत् २०२८ मा नेपाल भित्रिएको थियो । आईबीएम १४०१ को कम्प्युटर भित्रनुभन्दा ४९ वर्षअघि कम्प्युटर इन्जिनियर मुनिबहादुर शाक्यले नेपालमै माइक्रो कम्प्युटर आविष्कार गरिसकेका थिए । कम्प्युटर इतिहास पढाउँदा भाडामा ल्याइएको कम्प्युटरबारे जानकारी गराइन्छ तर कम्प्युटर इन्जिनियर शाक्यको कम्प्युटर निर्माण योगदानबार..
स्मार्टफोनको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याट्रिको चार्जिङ नै हो । कहिले काँही राम्रोभन्दा राम्रो फोन ब्याट्रिमा समस्या आएपछि त्यो प्रयोगहिन हुन्छन् । यस्तोमा तपाईंले स्मार्टफोन चार्ज गर्नुपर्ने सहि तरिकाबारे थाहा पाउन जरुरी छ । – ब्याट्रि शत प्रतिशत चार्ज भएपछि पनि तपाईं त्यसलाई प्लगबाट हटाउनुहुन्न मोबाइल ? यो गलत हो । यसै कारणले फोन..
नेपालमा बाइक र स्कुटर चलाउनेहरुको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा मात्र नभई पूरा संसारभरी इन्धनको समस्या लगातार बढिरहेको छ । दिन प्रतिदिन पेट्रोल डिजेलको मूल्यको चर्को बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । तपाईंको पैसा धेरैजसो पेट्रोलमा खर्च नहोस् भन्नका लागि आज हामी तपाईंलाई केही तरिका बताउँदै छौं । बाइक चलाउने समयमा ..
वासिङ्गटन – पृथ्वीको सबभन्दा निकट रहेको र “रक्त ग्रह (रेड प्लानेट)” को नामबाट पनि परिचित मङ्गल ग्रहमा एक बिशाल र अनौठो बनावट देखिएको छ । इन्टरनेट सञ्जालको “मुन्डो डेस्कोनोसिडो” नाम शीर्षकको यु ट्युब प्रसारणमा हालै मात्र पोस्ट गरिएको मङ्गल ग्रहको पछिल्लो तस्बीरमा तीन वटा निकै अग्ला धरहरा (टावर) देखिएका छन् । झट्ट हेर्दा ती ..
नोकिया आफ्नो नयाँ स्मार्टफोनसँगै सन् २०१७ मा बजारमा फिर्ता हुने तयारीमा छ । रिपोर्टका अनुसार नोकिया मोबाइलले सन् डीवानसी एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको दुईवटा संस्करण लञ्च गर्नेछ जसको मूल्य १० हजार भारुको वरिपरि रहने बताएको छ । यद्यपी, अहिलेसम्म यसको सही मूल्य तय गरिएको छैन तर यसको २ जीबी (लगभग १० हजार भारु) र ३ जीबी (लगभग […]
संसारको पहिलो ट्याङ्गो स्मार्टफोन लेनोभो फ्याब टु प्रो बिक्रिका लागि बजारमा आइसकेको छ । यो स्मार्टफोनलाई लेनोभोले गुगलसँग मिलेर बनाएको हो । प्रयोगकर्ताले यसलाई कम्पनीको वेबसाइटबाट खरिद गर्न सक्नेछन् । यसको मूल्य ५ सय डलर हो (लगभग ५४ हजार नेपाली रुपैयाँ) । यो स्मार्टफोनमा चारवटा क्यामरा भएकाले यो विशेष छ । यसमा तीनवटा रेयर र [&he..
घरमा फोन बिर्सनुभयो ? यसरी हेर्नुहोस् कल र मेसेजको नोटिफिकेसन
स्मार्टफोन यस्तो डिभाइस बनेको छ जसलाई थोरै समयको लागि पनि आफूबाट अलग गर्न सकिन्न । फोनको आवश्यकता नहुँदा पनि पटक–पटक नोटिफिकेसन चेक गर्ने हाम्रो बानी छुट्दैन । सोच्नुहोस्, यदि यही फोन तपाईं कहिले घरमा बिर्सेर कतै जानु भयो भने के गर्ने ? आज हामी तपाईंलाई त्यस्तो उपायबारे जानकारी दिँदै छौं जसमार्फत तपाईं फोनको नोटिफिकेसनलाई ल्यापट..
एक सेकेन्डमा यति धेरै हलचल हुन्छन् इन्टरनेटमा
हुन त इन्टरनेट शान्त देखिन्छ तर हरेक सेकेन्ड यसमा कति धेरै हलचल हुन्छन् भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन होला । आज हामी तपाईंलाई यसबारे बताउँदैछौं । एक सेकेन्डमा २५ लाख ३० हजार ४ सय ८० इमेल पठाइन्छ । युट्युबमा एक सेकेन्डमा १ लाख ३३ हजार १६ भिडियो हेरिन्छन् । ५६ हजार ६ सय ७६ पटक गुगलमा […]
नासाको तर्फबाट जारी गरिएको मंगल ग्रहको एक फोटोमा अब प्राचिन शहर देखिएको दाबी गरिएको छ । प्यारानोमल इन्भेस्टिगेटर्सको दाबी अनुसार यसमा प्राचिन शहरको अवशेष देखिँदै आएको छ । यूनाइटेड फ्यामिली अफ एनोमली हन्टर्सले यसलाई राम्रोसँग देखाउनका लागि फोटोहरुको एक भिडियो तयार गरेको छ । यद्यपी, नासाले भने यसको पुष्टि गरेको छैन । युट्युबमा यो ..
चीनियाँ कम्पनी जेटटीईले सीमित संस्करण स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । यो मिड रेन्ज स्मार्टफोन आफ्नो पुरानो भेरियन्ट एक्सन सेभेनको एक्सटेन्सन हो । यो अहिलेसम्म अमेरिकी बजारमा मात्र उपलब्ध छ । एक्सन सेभेन प्रिमियरको नामले सार्वजनिक भएको यो फोन डिस्प्ले, र्याम, स्टोरेज र डिजाइनमा निकै उत्कृष्ट छ । यो स्मार्टफोनको मूल्य लगभग ५४ हजार ..
आजको २१ औं शताब्दिमा स्मार्टफोन, कम्प्युटर र इन्टरनेट तपाईंको अभिन्न अंग बनेको छ । प्रविधिको यो दुनियाँमा तपाईंले सावधानी नअपनाउँदा ठूलो संकट आइलाग्न सक्छ । खतरनाक ह्याकरबाट बचाउनका लागि आज हामी तपाईंलाई केही तरिकाबारे जानकारी दिँदै छौं जसमा निर्भर भएर तपाईंले आफ्नो अनलाइनमा उपस्थितीलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ । सेफ पासवर्डः कु..
आउँदो डिसेम्बरमा सामसङले रङ छनोटसँगै सामसङ ग्यालेक्सी एससेभेन सार्वजनिक गर्ने तय गरेको छ । एप्पलको चिल्लो कालो आइफोनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सामसङले ग्यालेक्सी एससेभेनलाई बजारमा उतार्न लागेको बताइएको छ । गत अगस्टमा ग्यालेक्सी नोट सेभेन लञ्च गरेपछि स्मार्टफोनको दुनियाँमा सामसङको उत्कृष्ट छवि रहन सफल भएको थियो । कम्पनीको ग्याल..
गुगल अर्थले आफ्नो नयाँ एप्लिकेशन (गुगल अर्थ भीआर) अर्थात् गुगल अर्थ भर्चुअल रियालिटी लञ्च गरेको छ । अब घर बसीबसी तपाईं संसारको कुनै पनि चर्चित ठाउँलाई हेर्न त सक्नुहुन्छ नै साथै त्यहाँ भएको महसुस पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यो अचम्मको अनुभवलाई पाउनका लागि तपाईंको हातमा भिवर ह्यान्डसेट । यसलाई लगाएपछि गूगल अर्थ भिवरमार्फत भर्चुअल स्क्र..
न्युजिल्याण्डको भूकम्प अहिलेसम्मकै ‘अनौठो र जटिल’, वैज्ञानिक चकित
क्राइस्टचर्च – गत सोमबार न्युजिल्याण्डमा गएको शक्तिशाली भूकम्प अहिलेसम्म मापन भएको सबैभन्दा जटिल भूकम्प रहेको भूगर्भविद्हरुले बताएका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार भूकम्पको प्रारम्भिक धक्का दुई फरक–फरक शक्तिशाली भूकम्पको थियो, जुन मिलेर दुई मिनेट लामोसम्म कम्पन भएको थियो । जियोनेटका अनुसार जमिनमा मापन भएको सबैभन्दा जटिल भूकम्प थियो..
चीनियाँ स्मार्टफोन उत्पादक कम्पनी वीवोले सेल्फी प्रेमीका लागि वीवो वीफाइभ स्मार्टफोन लञ्च गरेको छ । यो फोनको मुख्य विशेषताको कुरा गर्नुपर्दा यसमा २० मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा छ । कम्पनीको दाबी अनुसार यो संसारको पहिलो फोन हो नसमा २० मेगापिक्सेलको क्यामरा दिइएको छ । वीवोका अनुसार उनीहरुको यो नयाँ स्मार्टफोन प्रविधि र डिजाइनको उ..
शताब्दिकै ठूलो चन्द्रमा आज देख्न पाइने, तयार हुनुहुन्छ ?
हामीले चन्द्रमाको जतिसुकै तारिफ गरेपनि त्यो कम नै हुन्छ । चन्द्रमा प्रकृतिले हामीलाई दिएको एक अनुपम उपहार हो । यदि तपाईं प्रकृतिप्रेमी हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईंले यस वर्ष पुनः उदाउने ‘सुपरमुन’ हेर्न छुटाउनु हुन्न होला । यो ‘सुपरमुन’ साँच्चै नै निकै ठूलो हुने बताइएको छ । सन् १९४८ पछि चन्द्रमा धर्तीको सबैभन्दा नजिक हुनेछ [&he..
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाकाले फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने उपकरण जडान गरी सफल परीक्षण गरेको छ । यो नेपालको पहिलो यस्तो परियोजना हो । भारतबाट किनेर ल्याइएका उपकरणबाट दैनिक १४ किलोबाट विजुली निकाल्ने जनाइएको छ । भारतबाट एक करोड ८२ लाख रुपैयाँमा उपकरण किनेर ल्याइएको हो । यो नमुना परियोजना सफल भए अरु ठूला परियोजना अगाडिबढाउन सकिने..